म कसैलाई प्रतिष्पर्धी ठान्दिनः राम कार्की (अन्तरवार्ता) - Jhapa Online
मेचीनगर, मंसिर १८ । झापाको क्षेत्र नं. १ मा वाम गठबन्धनका लागि माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका छन्, राम कार्की । माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका उनी बौद्धिक एवं तार्किक नेताका रुपमा चिनिन्छन् ।
ओखलढुंगाको रुम्जाटारमा जन्मिएका कार्की ०२८ सालदेखि उनले राजनीतिक यात्रा सुरुवात् गरेका थिए । कार्की माआवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सूचना तथा सञ्चारमन्त्री बनेका थिए ।
उनी प्रचण्ड सरकारको प्रवक्ता समेत बने । उनी ०७० सालमा समानुपातिकबाट संसदमा निर्वाचित भएका थिए । त्यसअघि उनी ०६४ सालको निर्वाचनमा ताप्लेजुङ क्षेत्र नं. १ बाट पराजित भएका थिए ।
अहिले उनी झापा १ मा कांग्रेसका युवा नेता विश्वप्रकाश शर्मासँग प्रतिष्पर्धा गर्दैछन् । प्रस्तुत छ, उनै कार्कीसँग झापा अनलाइनका लागि गरिएको कुराकानीः
सर्वप्रथम, तपाईंबाट राजनीतिक यात्राबाटै कुरा सुरु गरौैं । कहिलेबाट राजनीतिमा होमिनु भयो ?
– मेरो राजनीतिक यात्रा २०२८ सालमा जब म म्यट्रिकको परीक्षा दिएपछि शुरु भएको हो । त्यतिखेर म एउटा प्रतिभाशाली विद्यार्थीको रुपमा गनिन्थे । जिल्लामा भएको साहित्यिक प्रतियोगितामा मैलै प्रथम पुरस्कार पाएँ ।
त्यसपछि स्वभाविक रुपमा राजनैतिक व्यक्तित्वहरुको नजर म माथि पर्यो । शुरुमा म बीपी कोइरालाबाट प्रभावित थिएँ । २०३२ सालमा मेलमिलापको कार्यक्रम आएपछि म चाँहि उहाँहरुबाट असन्तुष्ट भई रामराजा प्रसाद सिंहले गणतन्त्रको वकालत गरिरहनु भएको थियो । चेकुभारालाई आफ्नो आदर्श मान्नु हुन्थ्यो ।
म पनि त्यो अवस्थामा चेकुभाराको फाटफुट रुपमा अध्ययन गरी सकेको थिएँ । म त्यसबाट निक्कै प्रभावित भएको थिएँ । यसरीमा मेरो राजनीतिक यात्रा शुरु भयो । तत्कालीन अवस्थामा माक्र्सवाद र लेनिनवादको सिद्धान्तलाई मैले अवल्याएँ । आर्थिक रुपमा हुने भनेर गनिएको परिवारमै जन्मिएको हुँ ।
मेरो हजुरबुवा लेफटान हुनुहुन्थ्यो । तर म ७ वर्षको हुँदा मेरो बुवा खस्नुभयो । त्यसकारण सम्पत्तिको खासै सदुपयोग हुन सकेन ।
बाल्यकाल कठिनाई मै बित्यो । तर राजनीतिक यात्रा मेरो निरन्तर नै रह्यो । म एक्लो महसुस कहिलै गरिन । राम्रो पढेलेखेको महिलासँग मेरो विवाह भयो ।
मेरो घरको व्यवहार उनले सम्हालिन । आर्थिक रुपमा नि सबल भएका कारण कसैसँग झुक्नुपर्ने अवस्थाको सिर्जना भएन ।
तपाईंको एजेन्डा केके हुन् ?
– कम्युनिष्टहरुको एजेन्डा मेरो एजेन्डा हो । कम्युनिष्ट पार्टीहरुको एजेन्डाहरु स्थापित गर्न मैले योगदान दिएको छ । अहिले संविधानमा जुन समाजवाद उल्लेख गरिएको छ । त्यो समाजवाद परिभाषित भएको छ । कस्तो समाजवाद भन्ने उल्लेख गरिएको छैन ।
संसारमा विभिन्न ढाँचाका समाजवादहरु छन् । त्यसमा वीपी कोइरालाहरुले भन्ने गरेको प्रजातान्त्रिक समाजवाद । अर्काेतर्फ लेनिन र माओहरुले विकसित गरेको समाजवाद ।
मेरो रायमा नेपालका निम्ति विश्वमा भएका समाजवादहरुको प्रयोग गरी त्यसलाई नयाँ रुपमा हामीले नेपालमा प्रयोग गर्न खोजिरहेका छौँ ।
बेलायतको आन्दोलन के भयो ? अमेरिकामा समाजवादी आन्दोलन के भो ? युरोप वा अरु देशहरुमा समाजवादी आन्दोलन के भो ? त्यो हेरिँदैन । जसरी स्ववीयु संघ ढल्यो ।
त्यसरी नै वेलायतका लेबरर पार्टीका नेताहरुले पनि जीवनको अन्तिममा लेखेका छन् की श्रमिकहरुका लागि गर्न चाहन्थ्यौँ । त्यो हुन सकेन ।
चुनावबाट नयाँ प्रयोग गर्छाै कामदारका लागि पनि सजिलो व्यवस्था ल्याउँछौ भन्ने सोचका साथ त्यसमा हामी असफल भयौँ भन्ने कुरा उनीहरुको जीवनी पढेर सुनेको छु ।
त्यसो हुनाले नेपालका निम्ति समाजवाद नै मौलिक चरित्र बोकेको नेपालको विशेषता सुहाउँदो र इतिहासमा समाजवादका प्रयोगहरु भए त्यसका सफलता र असफलताको शिक्षाबाट नेपालमा समाजवाद लागु गर्नुपर्छ भन्नेमा लागेका छौँ ।
समाजवाद कस्तो हुन्छ, के हुन्छ ? भन्ने रणनीति बनाउनका निम्ति स्वाभाविक रुपमा म योगदान दिन चाहन्छु ।
मतदाताले तपाईलाई नै किन मत दिने ?
-मलाई यसकारण भोट दिने कि २०/३० वर्ष नेपाललाई राजनीतिक एजेन्डाबाट अगाडि बढाउने र नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने स्वतन्त्र स्वभिमानी, आत्मनिर्भर, सम्पन्न र समृद्ध तथा विविधतायुक्त भएको नेपाल बनाउनु पर्नेछ ।
-म कसैलाई प्रतिस्पर्धी ठान्दिन । म विजयको लागि उठिराखेको छु । जित्नको लागि । म कसैलाई हराउने कुरा सोच्दिन । म विजयी हुन्छु । हाम्रो पार्टी विजयी हुन्छ । र, पार्टी विजय हुनु यसकारण छ कि लगत्तै पार्टी एकीकरण गर्ने घोषणा गरेका छौँ ।
– जित्ने आधार त एउटा वामपन्थी मत नै हो । अर्काे कुरो मेरो राजनीतिक जीवनले पनि त्यसलाई मद्दत गर्छ । किनभने मेरो जीवनमा म मन्त्री पनि भए । सांसद पनि भएँ ।
तर पनि मैले आफ्नो जुन कम्युनिष्ट आचरण हो त्यसलाई मैले पालना गरिरहेँ । यी कारणले गर्दा मलाई लाग्छ जनताले मलाई रोज्नु हुन्छ ।
-एउटा त समग्र नेपालकै विकास गर्नु छ । त्यसमा पनि मेरोे योगदान रहनेछ । हामी नेपालमा कस्तो खाले शिक्षा नीति लागु गर्ने, कस्तो प्रकारको भूमि व्यवस्थापन गर्ने, नेपालले विकासको कस्तो रणनीति अपनाउने ।
एउटा दीर्घकालीन विकास रणनीति जुन अर्थ राजनीतिसँग सम्बन्धित हुन्छ । त्यसमा म योगदान गर्छु । त्यसैले समग्र नेपालको विकासका नीति बनाउँछौँ । मजदुर किसान श्रमिक वर्गलाई ध्यान दिएर नीति बनाउँछौँ ।
त्यसैले नीति बनाउँदा श्रमिकहरुको ज्यालामा अभिवृद्धि गराउँछौँ । अब बन्द भएका उद्योगहरुलाई खोल्ने, नेपालमा बाटो बनाउँदा खेरी त्यसले उत्पादनलाई जोडोस् र नेपालकै अर्काे ठाउँलाई लिंक गरोस् । यो पनि सोच राख्ने रहेको छ ।
अर्काे कुरा हामीले पाँच/सात वटा बाटो उत्तर तिर पनि बनाउन जरुरी छ । जसले गर्दा हाम्रो छिमेकी चिनले रेलमार्ग बनाएको छ । त्यहाँसम्म हाम्रो पहुँच हुन सकोस् ।
झापाकै निम्ति भन्नु हुन्छ भने म पूर्वाञ्चलमा यहाँको प्रदेश नम्बर १ को इञ्चार्ज, त्यो भन्दा पहिले मेचीको इञ्चार्ज भएर बसेको छ । त्यसले गर्दा मलाई झापाका विशेषताहरु थाहा छ । झापाका नदी वरदान पनि अभिसाप पनि हो ।
यहाँका खहरे खोलाहरु व्यवस्थित गर्नुको, अर्को कुरा यहाँ हात्तीको समस्या छ । यसबाट जनतालाइृ छुटकार दिलाउनु छ । त्यस्तै विगत केही दशकदेखि राटिय महत्वका उद्योगहरु झापामा देखापरिरहेका छैनन् ।
त्यसो हुनाले झापामा उद्योगहरु स्थापना गर्नु, प्राविधिक कलेजहरु खोल्नु, मेडिकल कलेजहरु खोल्नु, इन्जिनियरिङ कलेजहरु खोल्नु । यी तमाम कुराहरु मेरो एजेण्डामा पर्छन् ।
त्यसलाई सार्थक बनाउनका निमित्त पनि मेरो विजयी हुनु जरुरी छ ।
-निर्वाचन हँुदैछ । यो वडाको निर्वाचन होइन । यो केन्द्रको निम्ति सांसद छानिने कुरा हो । वडाको निम्ति भए, स्थानीय या अरु अरु कुरा गर्न मिल्थ्यो । नेपालको हरेक नागरिकलाई हरेक क्षेत्रबाट चुनाव लड्ने अधिकार छ ।
विगतमा नेपाली काँग्रेसका नेता कृष्णप्रसाद भट्टराईले पर्सा जस्तो मधेशमा आएर चुनाव लड्नु भयो । हाम्रा मदन भण्डारी, प्रचण्ड लगायतका नेताहरुले विभिन्न क्षेत्रहरुबाट निर्वाचन लड्नु भएको इतिहास छ ।
यो चाहिँ राजनीतिक इसु नभएपछि उठाइने कुरा हो । यस्ता कुराहरु पञ्यायतकालमा गरिन्थ्यो । जातिको, क्षेत्रको, गोत्रको कुरा उठाइन्थ्यो । अहिले उठाउनुको कारण उहाँहरुसँग अरु राजनीतिक मुद्दा नभएर हो ।
चुनावी अंकगणित स्पस्ट नै छ । बाम गठबन्धन १७ हजारभन्दा बढी मतले अगाडि छ । यसमा पनि राप्रपाको मत पनि थपिएको छ । त्यसैले पनि हामी हाम्रो विजयप्रति ढुक्क छौ ।
-किनभने कम्युनिस्ट पार्टीको कार्यव्रmम रणनीतिक लक्ष्य र हिँड्ने बाटोको कुरामा कुनै मतभेद देखिदैन । खासगरी २०६३ /०६४ पछि एमाले र माओवादी पार्टी एउटै निष्कर्षमा आइपुगेका छन् ।
उनीहरुले समाजलाई जुन ढंगले अध्ययन गरिरहेका छन्, त्यो अध्ययनबाट एउटै प्रकारको निस्कर्ष निस्किएको छ । चाहे त्यो प्रजातन्त्रको बारेमा होस् या वर्तमान अवस्थाको बारेको होस् या त भावी रणनीतिको बारे मा नै किन नहोस् । अनि बाटोको बारेमा ।
कुन बाटोबाट समाजवमादमा पुग्ने भन्ने विषयमा पनि मतक्य हुने भएकाले पनि पार्टी एकीकरण हुन्छ । नेपालका श्रमजीवि जनताको उत्कट चाहना पनि हो ।
-समाजका सबै प्रतिगामी अप्रजातान्त्रिक पक्षहरुसँग संघर्ष हुँदैछ । त्यसमा जो उभिन आउँछ, त्यो विरुद्ध स्वाभाविक रुपमा संघर्ष गर्नैपर्ने हुन्छ ।
सुकुम्बासी, दलित, मुस्लिम समुदाय, महिलाहरुको संसारभित्र पनि प्रजातन्त्र पुग्नु पर्छ भन्ने हो । त्यसैले प्रजातन्त्रको विस्तारलाई घनिभूत पार्ने कुरा हामी गर्छौ ।
आफूसँग(काँग्रेस) इसु नभएर, आफ्नो अस्तित्व बचाउनका निमित्त यस्तो अनर्गल प्रचार गरिरहेका छन् ।
अझ पार्टी एकताको घोषणाले देखिएको उत्साहको मत हामीसँग छ ।
मलाई पार्टीले जहाँ जिम्मेवारी दियो, त्यो काम पूरा गर्दै आएको छु । कुनैबेला मलाई अन्तराटिय विभाग प्रमुख त कहिले प्रदेश प्रमुख भएर काम गरेछु । एक नम्बर प्रदेशको इञ्चार्ज हुँदा म एउटै टोलमा एउटै गाउँमा, क्षेत्रमा सीमित भएर बस्ने कुरा भएन । र, स्थानीय बादको नारा लगाएर जुन साथीहरु चुनाव लडिरहनु भएको छ ।
उहाँहरु पनि १ नम्बर क्षेत्रमा मात्रै बस्नु भएन । देशैभरि आको गाको र विदेशतिर गाको पनि सुनिथ्यो होइन । मैले नि बेलाबखत फोन गर्दा दाई म बाहिर जाँदैछु भन्ने कुरा सुन्थेँ मैले ।
अहिले चाहिँ मलाई पार्टीले १ नम्बर क्षेत्र जिम्मेवारी दिएको छ । त्यसैले मैले राजनीतिक रुपमा प्रदेश नं. १ मा नै नेतृत्व खेल्ने भूमिका गर्छु र मैले विकास निमाृण लगायत अरु कुराहरुमा १ नम्बर क्षेत्रमा नै केन्द्रित हुन्छु । किनभने मेरो जिम्मेवारी यहीँ ठाउँमा छ ।
त्यसैले म यहीँ नै केन्द्रित हुन्छु । म मतदाताहरुलाई यही विश्वास दिलाउँदै बाम गठबन्धनलाई अत्याधिक मत दिएर जिताउन हुन आग्रह गर्दछु ।
Tagsझापा १ राम कार्की
ओलीले दमकमा पत्रकारलाई सोधे– म प्रधानमन्त्री भएको वेला कसैले बिहे गरेनन् कि क्या हो ?